किन हुन्छ व्यक्ति हत्या ? « News24 : Premium News Channel
किन हुन्छ व्यक्ति हत्या ?
काठमाडौं । राजधानीको शान्तिनगरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरद गौचनको गोली हानी हत्या भयो । सार्पसुटरको गोली प्रहारबाट भएको गौचनको हत्या भारतीय आपराधिक समूहबाट भएको आकलन धेरैले गरेका थिए ।
लोप्साङ लामाले प्रहरी र केही सञ्चारमाध्यममा फोन गरी घटना मनोज पुनले गराएको जानकारी दिए । घटना अनुसन्धान गर्न बनेको अनुसन्धान कार्यदल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गौचनको लगानीबारे तथ्य बाहिर ल्यायो । प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका गुन्डा नाइके कुमार घैंटेको साढे दुई करोड रुपैयाँ गौचनले आफ्नो डाँफे कन्ट्रक्सनमा लगानी गरेका थिए । त्योमध्ये एक करोड रुपैयाँ अर्का गुन्डा नाइके समीरमानसिंह बस्नेतले दाबी गरेको रहस्य खुलेको थियो ।
गौचनको हत्यामा बस्नेतसँगै पुनको पनि संलग्नता रहेको दाबी प्रहरीको छ । राज्यको सुरक्षा निकायलाई ठाडै चुनौती दिएर गराइएको यो घटनालाई कम आँक्न मिल्ने अवस्था थिएन । शुक्रबार बिहान बुटवलको देवदहमा अर्का फर्निचर व्यापारी वसन्त पौडेल बलुको गोली हानी हत्या भयो । हत्याको जिम्मेवारी पुनले लिएका छन् । पुनले एक वर्षअघि युवा संघ नेपालका रुपन्देही अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या गरेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
हत्या गरिसकेपछि मिडिया र प्रहरीलाई फोन गरी घटना आफूले गराएको जानकारी गराउने प्रवृत्ति धेरै डरलाग्दो रहेको र यसलाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसके परिस्थिति झन् भयावह हुने देख्छन् ।
रुपन्देही भारतीय सीमाबाट नजिक भएकाले पनि व्यक्ति हत्या गरेर भाग्न र लुक्न सजिलो भएका कारण जघन्य प्रकृतिका घटना दोहोरिएको हो । नेपालकै गुन्डासमूह भारतमा बसेर आपराधिक सञ्जाल फिँजाई नेपाली व्यवसायी हत्या गर्नुले राज्यको सुरक्षा चुनौतीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी थप
उपेन्द्र र बाबुरामबीच गम्भीर खटपट
काठमाडौँ । विभाजन भएको ६ महिनामै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा गम्भीर विवाद देखिएको छ। जसपा
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडलको अध्यक्षतामा भएको मेडिकल कलेजले अतिरिक्त
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा क्याम्पसको पढाइ माघ १० गतेसम्म बन्द हुने भएका